Attitudes publiques au Madagascar Juillet 22 – Août 5, 2013 – MyDago.com aime Madagascar
Attitudes publiques au Madagascar Juillet 22 – Août 5, 2013
Lalao Ravalomanana à Valihazo avec le SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ANTSINANANA PPAA 12 le 25 juillet 2013
Invitation pour le 14 juillet, coup fourre
Auteur Solo Razafy*Publié le 27 août 2013 Catégories Politique
7 pensées sur “Attitudes publiques au Madagascar Juillet 22 – Août 5, 2013”
27 août 2013 à 11 h 36 min
Alerte Infos : Une Intervention Occidentale en Syrie se précise …
27 août 2013 à 11 h 40 min
Risques d’Embrasement du Golfe …
Tensions CHINE – USA – RUSSIE
Quels conséquences pour l’Océan Indien …??
BFMTV en Direct …
27 août 2013 à 11 h 43 min
Alohan’ny namohanareo an’io « sondage » io, mba nanao fanadiadiana va ianareo ry MyDago ?
Raha ny valim-panontaniana hita mantsy, dia hoe « tena tsara fitsaboana » ny malagasy amin’izao fotoana izao !
Firy ny isan’ireo CSB nikatona, kanefa ireo no tena mba nahafahan’ny vahoaka madinika nitsabo tena ? Mba firy isan-jaton’ny vahoaka no nahita an’izany « hôpitaly manara-penitra » izany ? Ireo farany ireo mantsy amiko, dia toa ilay Coliseum manara-penitra izay tsy azo ampiasain’ny rehetra !
Ary inona koa ity resaka hoe « Modernisation de l’infrastructure du pays » ity ?
« Infrastruscture » inona moa ity atao resaka, rahatoa ka voatery nandeha niasa any ivelany daholo ny « injeniera » rehetra, satria tsy misy asa atao intsony ao an-toerana ?
Ary mba aiza ny resaka « kolikoly » sy « tsy fandriam-pahalemana sy ny famonoan’olona » ?
Lazaina fa eo amin’ny lafin’ny traikefa dia rehefa atao ny fandinihina, 42 % no milaza fa manana an’izany i Ramatoa Ravalomanana ary 58 % no milaza fa tsy any aminy izany !
Farany : Inona no maha samy hafa amin’ny atao hoe » Crise politique » sy ny « Situation politique/Lutte de pouvoir » ?
Tena mitolona ho an’ny fiverenan’ny ara-dalàna marina ve, ny famoahana an’izao « sondage mivilana » izao ?
Fandrebirebena saim-bahoaka ny famoahana an’izao na dia atao hoe maro aza ireo « points positifs » azon’Ingahy Ravalomanana !
Miala tsiny be dia be aminareo ! Amiko manokana dia « sondage fôpla » izao satria tsy ny tena zava-dehibe no nanontaniana tamin’ny vahoaka !
Ohatra iray omeko fotsiny : Rehefa tsy navelan’ny « mpitondra fanjakàna » haneho ny hevitrareo eny an-dalambe ianareo, ekenareo ve ny fanonganam-panjakàna sy ny tsy fampiarana ny Lalàna ?
O Radenisy o !: iza no nampirevirevy ny malagasy efa-taona lasa mahery izay ? Ary inona no nitranga efa-taona lasa mahery izao ? KRIZY sa TSY KRIZY no misy eto Madagasikara nandritry izay fotoana izay ? Ilay Ra8 nahilika anie ka tsy eto an-toerana intsony e ! Hita fa anisan’ireo tsy « victimes » @ izao fitondràna izao ianao ka tsy hitanao mihitsy ny ankamaroan’ireo mpiray tanindrazana aminao sahirana dia sahirana.
Précédent Article précédent : MOVANSY RAVALOMANANA : HANOLOTRA KANDIDA HAFA
Suivant Article suivant : RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : MIALA NY CES , CENI-T FA TSY MAHAVITA AZY